Kolikoly amerikana ve? B737 Max Victims dia tsy nanana vintana nanohitra an'i Boeing
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Kolikoly amerikana ve? B737 Max Victims dia tsy nanana vintana nanohitra an'i Boeing
Airlines • Aviation • Vaovao Mafana Ethiopia • Vaovao Mafana Indonezia • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao Mafana US • Crime • Vaovaom-panjakana • Vaovao • People • Safety • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Ahoana no hiantsoan'ny olona raha ny mpampanoa lalàna amin'ny raharaha mpanao heloka bevava goavambe (Boeing) no manatevin-daharana ny orinasa mpiaro ny raharaham-pitsarana lehibe indrindra volana maro taorian'ny raharaha. Ary ahoana ny amin'ny fiantsoana azy io ho modely opera Boeing, na angamba nolavina ny fitsarana amerikana?
Olona 346 no maty tamin'ny 2019 tao anatin'ny lozam-pifamoivoizana Boeing 737 MAX roa nanidina tamin'ny fiaramanidina Ethiopian Airlines tany Ethiopia ary teo aloha tamin'ny sidina Lyon Air any Indonezia. Fitsarana ady heloka bevava natao tamin'i Boeing dia nalamina tamin'ny fiandohan'ity taona ity niaraka tamin'ny fifanarahana fampanoavana nahemotra, ary asehony ankehitriny ny antony.
Boeing dia orinasam-pamokarana fiaramanidina monina ao Seattle miaraka amin'ny foibe foibe any Chicago, Illinois. Fa maninona no misy fitarainana heloka bevava anenjehana an'i Boeing any Ft. Tsara ve, Texas?
Ny orinasan-dalàna momba ny fiarovana ao Boeing, Kirkland & Ellis, dia nanao fifanarahana mahafinaritra tamin'ilay mpampanoa lalàna amerikana malaza Erin Nealy Cox. Volana maromaro taorian'io dia nijanona tamin'ny asany goavambe i Erin Nealy Cox ary niditra tao amin'i Kirkland & Ellis izay nampiahiahy ny amin'ny fividianana masaka.
Ny raharaham-pitsarana Boeing heloka bevava dia natao hanomezana rariny ny fianakavian'ireo 346 tamin'ireo maty tamin'ny fianjeran'i Ethiopian Airlines sy Lion Air. Ny valin'ny fitsarana Texas dia tsy nisy mpiandraikitra ambony Boeing voampanga.
Amin'ny 7 Janoary amin'ity taona ity eTurboNews namoaka lahatsoratra nosoratan'i Paul Hudson, lehiben'ny vondrona mpiaro ny zotram-piaramanidina Zon'ny Flyers. Nanoratra izy: Boeing dia voarohirohy ho niray tsikombakomba tamin'ny 737 Max, handoa onitra $ 2.5 miliara.
Tatitra navoaka androany tao amin'ny Mpitati-baovao momba ny heloka bevava dia nanambara ny pitsopitsony momba io fandaharana io izay nanondro fa ny mpisolovava voalohany nanenjika ny raharaha ho an'ny Sampan-draharahan'ny Fitsarana amerikana, ny mpisolovava amerikana teo aloha Erin Nealy Cox dia nanatevin-daharana ilay orinasam-pitsarana iray, Boeing izay nanakarama hiaro amin'ny raharaha ambony izay nenjehiny.
Ny fametrahana ny raharaha momba an'i Boeing ao Ft. Worth, Texas dia nahagaga hatramin'ny voalohany satria Texas dia tsy nifandray tamin'ireny.
Raha ny voalazan'ilay tatitra dia nisy ny fifanarahana fanenjehana navoakan'ny raharaha. Ity dia fifanarahana iray izay nantsoin'ny Profesora Lalàna any Columbia, John Coffee tamin'izay fotoana izay - "iray amin'ireo fifanarahana fanenjehana farany ratsy hitako."
Ny Crime Reporter dia namoaka valiny avy tamin'i Michael Stumo sy Nadia Milleon, izay namoy ny zanany vavy 24 taona tamin'ny fianjeran'i Ethiopian Airline.
"Tezitra izahay fa ny mpampanoa lalàna avy amin'ny Departemantan'ny Fitsarana dia nanapaka fifampiraharahana tamina Boeing izay namela an'i (CEO Boeing teo aloha) Dennis Muilenberg sy ny mpitantana Boeing ary ny mpikambana ao amin'ny birao hiala amin'ny faribolana noho ny tsy fitandremana sy ny hosoka vitany izay nahatonga ny fahafatesan'i Samya raha nanankarena izy ireo ny tenan'izy ireo, ”hoy i Stumo sy Milleron tao anaty fanambarana ho valin'ny vaovao. "Nanjavozavo izahay ny amin'ny antony nisafidian'ny Departemantan'ny Fitsarana ny Distrikan'ny Avaratra any Texas satria tsy nisy nifandraisany tamin'io distrika io ny fihetsika feno heloka bevava. Mpitsara manara-dalàna ve no notohanan'i Boeing? Ireo mpampanoa lalàna ekena ve no nahafantatra ny ekipa mpiaro ny heloka bevava an'i Boeing? Vaovao vaovao manaitra ity. ”
Paul Hudson an'ny vondrona mpanjifa Zon'ny Flyers nilaza eTurboNews ny tranga “dia ohatra iray amin'ny varavarana mihodina izay andehanan'ny mpiasa taloha an'arivony miasa ho an'ny antoko nofehezin'izy ireo ho mpiasam-panjakana. Nefa ny varavarana mihodina tsy tokony ho fehin-kibo. ”
Nofaranana i Hudson: "Raha miditra amin'ny antoko mpiaro heloka bevava na ny orinasam-piarovana ny lehiben'ny fampanoavana federaly taorinan'ny fotoana nisoloany ny governemanta amerikana amin'ny raharaha heloka bevava mifandraika amin'izany, dia mampipoitra ny ahiahy eo amin'ny endrika ivelany sy ny olana ara-etika izany."